‘Iyagaa Dagaalama Annagaase Dhimana’: Qoysas is-rasaasayn Ay Lu Qabsatay Afganistaan | Gaaroodi News
‘Iyagaa Dagaalama Annagaase Dhimana’: Qoysas is-rasaasayn Ay Lu Qabsatay Afganistaan
October 18, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Dadka rayidka ah ayaa ka qaxaya dagaalka gobolka Helmand, waxayna magaalada kala baxayaan wixii ay qaadan karaan si colaadda uga cararaan.
“Waxa uu ahaa walwalkii ugu waynaa abid ee i soo mara. Nolosha ayaa mar qura isu badeshay qalalaase,” ayuu yiri Gul Maxamed.
25-jirkan macallimka ah wuxuu la daalaa dhacayaa inuu soo xasuusto sida ay ugu suuragashay in isaga iyo qoyskiisa, oo 25 qof ka kooban, ay ka soo badbaadaan duqeynta aan loo meeldayeyn iyo dagaalka markale ka soo cusboonaaday gobolka Helmand ee koonfurta waddanka Afgaanistaan.
Walow ay socdaan wadahadallo nabadeed, haddan waxaa soconaya weerrar cusub oo ay Taalibaan soo qaadday. Maalma uun ka hor inta uusan dagaalkan bilaaban, Gul Maxamed oo magaciisa la badelay si aanan loo aqoonsan, wuxuu hagaajinayay oo uu qurxinayay beertiisa.
Geedka ugu dheer beertaas waxaa lagu xirxiray buufinno, si qoyska ay ugu dabaaldegaan qalinjabinta gabadha ugu yar reerka.
“Haatan markii labaad ayey beertayadu gubatay, gurigeennana waxaa dhufeys ka dhigtay mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya,” ayuu BBC-da u sheegay. Gul Maxammed gurigiisa waxaa loo qurxiyay qalinjebinta walaashii.
Isaga, gabdhaha ay wadadhasheen iyo qoyskiisa kale, ayaa dhammaantood qaxay – oo habeen ayey seexdeen wadada ka hor inta aanay tegin hal guri oo ay ku nool yihiin 9 qoys oo kale, kaas oo ku yaal magaalada Lashkar Gah.
“Waxaynu nahay illaa 50 qof, oo waxaynu ku noolnahay jikooyin iyo musqulo oo qolol loo badelay, teendho barxadda lagu rakibay, halka qaarkeen aynu seexanno saqafka korkiisa,” ayuu yiri.
‘Xabadda wiiftada ee i dulmaraysay’
Sabtidii la soo dhaafay, ciidama badan oo ka tirsan Taalibaan waxay galeen tuulada ay deganaayeen qoyska Gul, arrintaas oo horseedday in weerrar rogaalcelis ah ay soo qaadeen militeriga Afgaanistaan. Gul Maxamed iyo qoyskiisa iyo 35,000 oo qof oo halkaas deganaa, ayaa habeenkaas lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan. Teendhaha ay Gul Maxammed iyo qoyskiisa ay deggan yihiin ee Lashkar Gah
Waxa uu sheegay inuu dagaal goob joog u soo ahaa hasayeeshee wuxuu markan arkay ayuu rumaysan la’yahay in kuwii filimaanta ay yihiin.
Tuulada ayaa ka mid aheyd goobaha uu dagaalka ka bilowday.
“Gantaal ayaa ku dhacay guri dariskayaga ah, waxaa halkaas ku dhintay laba qof. Waxaynu ahayn qoysas aad saaxiibo u ah – gantaalka waxa uu dilay hooyo 23-jir ah iyo wiilkeeda oo hal sano jiray, aabahoodna wuu arkayay markii waxaas ay dhacayeen.”
Qoyska Gul Maxammed ayaa isaga cararay deegaankaas xilligii dagaalyahannada Taalibaan ay aaggaas isku soo gadaamayeen. Ninka ay dariska yihiin ayey qasab ku noqotay inuu sii joogo si uu u aaso xaaskiisa iyo wiilkiisa.
“Hal kiilomitir oo kaliya ayey inoo jirtay meesha xabbada ay ka dhacaysay, mugdi ayaa jiray oo makhribkii kaddib ayey aheyd. Waxaan arki karay holaca rasaasta la isku dhaafsanayay waddooyinka – wiiftada ayaa i dulmaraysay. Aad ayeynu u nasiib badnayn – wayna adkayd wax lagu kala saari karay nolosha iyo geerida.”
Dadka waxay qaxaan habeenkii si ay u gaaraan qaraabada deegaankooda uu nabadda yahay ee Lashkar Gah
Dadka deegaankaas ku noolaa sida Gul Maxammed ee nasiibka u yeeshay in ay halkaas ka soo baxsadaan, waxa ay isticmaaleen wax kasta ee ay heli kareen – sida basas, gawaarida xamuulka qaada, mootooyin iyo weliba kuwa beeraha lagu falo. Wax walba way ka soo tageen.
Balse qaar ka mid ah qaraabadiisa ayaa weli ku xayiran tuulooyin ku yaalla inta u dhaxaysa goobaha ay ku dagaalamayaan Taalibaan iyo militariga Afgaanistan, mana aysan u suuragelin inay si nabad ah uga soo baxaan caasimadda gobolka ee Lashkar Gah.
Korontada iyo qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ayaa la damiyay, qoyskana war uma hayo waxa ku dhacay dadka ay ka soo tageen, arrintaas oo walaac wayn ku haysa, gaar ahaan hooyadiis oo da’ ah oo weli uu khalkhal ku jiro.
Kooxaha caafimaadka ee dabiibaya dadka uu weerrarka qabsaday ayaa sheegaya in dhaawaca ay arkeen uu muujinayo sida ay xaaladdu u xun tahay.
Dhibanaha ugu da’da yar waa canug aanan weli dhalan. Hooyadii waxa ay ka badbaaday xabbad wiifta ah xilli ay shaah la cabeysay saaxiibo, balse xabbadda waxay kaga dhacday caloosha iyadoo uur leh.
Kumbuyuutar la saaray hooyadaas ayaa muujiyay in xabaddu ay canuga ka haleeshay garabka midigta.
Shan sanadood ayey iyada iyo ninkeedaba ku qaadatay inay uur yeelato.
“Aad ayey ugu farxeen oo ay u soo dhaweeyeen in ugu dambayntii ay canug helayaan,” ayuu yiri Maxamed Forogh, oo ah ninka maamula qeybta dhimirka ee hay’adda samafalka ee Medicines Sans Frontiers (Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn) ee gobolka Helmand.
“Waxa ay ii sheegtay in xitaa ay magac usoo xuleen canugooda qorshe badanna ay diyaarsadeen. balse hadda ma doonayso in ay guriga tagto sababtoo ah waxay soo xasuusan doontaa canugeeda.”
Shaqaalaha hay’adda Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee ku sugan xarunta magaalada Lashkar Gah waxa ay la tacaalayaan haweeney kale oo ay soo haleeshay xabbad wiifta ah xilli ay wax siinaysay canugeeda oo sideed bilood jir ah. Labaduba waa ay badbaadeen.
Dhinacwalba waa nalaga hareereeyay
Qoyska Gul Maxamed ayaanan ahayn qoyska kaliya ee uu weerrarkan kadiska ku noqday.
Gul Maxammed wuxuu gaarigiisa ku burburay weerar dhacay sannadkii 2016-kii.
Keramullah, oo 19-jir ah, waxaa markaas u bilowday todobaadka si uu xoolaha iyo badeecooyinka kale ugu diyaariyo suuqa Khamiista, balse waxa uu maqlay in Taalibaan ay la wareegeen gacan ku haynta degmo halkaas u dhaw.
“Marka waxa aynu dareennay inaynaan haysan waqti aynu ku baxsanno.”
Wuxuu sheegay in markii ay damceen ay gurigooda isaga baxaan ay dagaalyahannada Taalibaan ay soo gaareen albaabka dambe ee gurigooda halka ciidammada dowladda Afgaanistanna ay albaabka hore joogeen. Dhexda ayey markaas u galeen labada dhinac ee dagaalamayay.
“Waxaynu lahayn guri wayn oo beer wayn leh. Xitaa waxaan maqlaynay codka diyaar hawada ku jirta, marka dhinacwalba waa nalaga hareereeyay.”
Keramullah waxa uu ka sheekeeyay sida walaalkii ka wayn ay ugu suuragashay inuu la hadlo labada dhinac ee uu ka dhaadhaciyay inay isaga baxaan.
Gobolka Helmand ayaa sidoo kale laga qaxay sannadkii 2016-kii.
“Waxaynu ka tuugnay in aanay na toogan – oo aan meesha isaga baxno kaddibna waxay doonayeen ay iska sameeyaan.”
Gurigooda waxa uu ku yaallaa meel u dhaw saldhig militari oo ay leeyihiin ciidammada Afgaanistaan, kaas oo udub dhexaad u ahaa dagaalka.
Labada dhinacba waxa ay duqeeyaan gurigooda intii uu dagaalka socday. “Hadda waxaan ognahay in gurigayaga ay u isticmaalayaan meel ay awoodda isugu geeyaan – waa askarta Taalibaan.”
Keramullah iyo hooyadiis iyo sideed wiil iyo lix gabdhood oo ay wadadhasheen ayaa ahaa dadkii ugu dambeeyay ee ka soo tegay tuuladaas kaddib markii suuqlayda ay albaabada isugu dhufteen dukaamadooda. Ninkan waxaa u doonan gabar waxa uuna lacago u kaydsanayay si uu ugu guursado muddo afar bilood gudahood ah.
“Hadda ma garanayo inaan middaas awoodi karo, sababtoo ah wax kasta iyo wixii aan kaydsanayay sannadahaas oo dhan waa ay tageen. Haatan waxaan ka fakarayaa oo kaliya sidii aan ku badbaadi lahaa, iyo sidii aan qoyska u badbaadin lahaa”, ayuu yiri.
Afar sanadood ka hor, markii tuulada weerrar noocaas oo kale ah lagu soo qaaday ayuu sidoo kale lumiyay waxkasta, oo uu ku jiro wiil yar oo ay ilma adeer yihiin